थकान संग लड्न को लागी खानाहरु कि तपाइँ उपभोग गर्नु पर्छ बेजिया
सुसाना Godoy | 28/08/2021 14:00 | पोषण
यो सत्य हो कि कहिले काहिँ यो हामीलाई राख्न को लागी गाह्रो हुन्छ, हामी आवश्यक भन्दा धेरै थकित हुन्छौं र जब कुनै अन्य स्पष्ट कारण छैन, तब हामीले समाधान खोज्नु पर्छ। के हुन्छ यदि हामी तपाइँलाई बताउँछौं कि थकान संग लड्न को लागी खानाहरु को एक श्रृंखला हो? हो, खाद्य पदार्थहरु कि तपाइँ जान्नुहुन्छ र त्यो तपाइँको टेबल मा हरेक दिन हुनु पर्छ।
हामी हाम्रो सक्दो गर्छौं एक स्वस्थ जीवन बिताउनुहोस्, तर कहिले काहिँ हामी ती पोषक तत्व वा भिटामिन को कमी छ कि हामीलाई पैदा हुन्छ रोगहरु को सबै प्रकार को बिरुद्ध अधिक सुरक्षित बनाउन को लागी। यस अवस्थामा, हामी ध्यान दिनेछौं कि कसरी ऊर्जा लगभग सोच बिना आउँछ। यी खानाहरु मध्ये कति तपाइँ दैनिक आधारमा उपभोग गर्नुहुन्छ?
1 केला थकान संग लड्न को लागी एक खाद्य पदार्थ हो
2 पालक र यसको फलाम योगदान
4 गाढा चकलेट
5 सुख्खा फलहरू
केला थकान संग लड्न को लागी एक खाद्य पदार्थ हो
तपाइँ यसलाई अनगिन्ती पटक सुन्नुभएको छ र उनीहरु गुमराह भएका छैनन्। फलहरु को बीच मा, हामी केले लाई हाइलाइट गर्दछौं कि ती खानाहरु मध्ये एक सबैभन्दा आधारभूत थकान संग लड्न को लागी हो। यो किनभने उनीहरुसँग विभिन्न भिटामिन र खनिजहरु छन्, जसको बीचमा पोटेशियम सधैं बाहिर खडा हुन्छ। तर यो त्यो बाहेक हो, हामीलाई फाइबर र कार्बोहाइड्रेट प्रदान गर्दछ। यो हाम्रो शरीर लाई चाहिने उर्जा दिन को लागी यो भन्दा धेरै सही को मिश्रण बनाउँछ। यसको अतिरिक्त, यो हामीलाई गहन शारीरिक व्यायाम पछि ठीक हुनेछ र कि यदि हामी यो भन्दा पहिले यो उपभोग गर्छौं।
पालक र यसको फलाम योगदान
सुरु गर्न को लागी, हामी जान्दछौं कि पालक हो फलाम को मुख्य स्रोतहरु मध्ये एक। तेसैले, हामीले उनीहरुलाई हाम्रो आहार मा बिर्सनु हुदैन। तपाइँ पहिले नै थाहा छ कि तपाइँ उनीहरुलाई बिभिन्न तरीकाले लिन सक्नुहुन्छ र यसले हामीलाई बोर हुन दिदैन। अर्कोतर्फ, यसमा म्याग्नेशियम र पोटेशियम पनि छ। यसको साथ, हामी सधैं एक सन्तुलित तरीका मा फलाम को स्तर बनाए राख्नेछौं, यसले हामीलाई टोन अप र हाम्रो शरीर को ख्याल राख्न मा मद्दत गर्दछ, साथै हाम्रो शरीर लाई बिल्कुल काम गर्न को लागी। यस्तो लाग्छ कि ती सबै फाइदाहरु हुन्!
न त हामी उसको बारेमा बिर्सन सक्छौं, किनकि हामी राम्ररी जान्दछौं कि उहाँ आफ्नो सबै महान योगदान को लागी प्रमुख सामग्री मध्ये एक हो। ती मध्ये हामी त्यो संगै छोडिएका छौं केरा र विभिन्न पोषक तत्वहरु भन्दा धेरै पोटेशियम छ। तेसैले यो उर्जा को एक महान स्रोत मा अनुवाद गर्दछ। यो तपाइँको शरीर को साथ साथै तपाइँको दृष्टि को ख्याल राख्नेछ र यो सबै र अधिक को लागी, तपाइँ यसलाई तपाइँको प्लेट मा जोड्नु पर्छ, सधैं एक सानो अन्तर छोड्नु पर्छ।
यो चकलेट को बारे मा कुरा गरीरहेको छ र पक्कै यो पहिले नै हामीलाई मात्र यो पढेर हामीलाई सक्रिय गर्दछ। ठिक छ, यो थकान संग लड्न को लागी ती खानाहरु मध्ये एक हो कि हामी सबैभन्दा मनपर्छ। निस्सन्देह, अधिक शुद्ध कोको यो छ, राम्रो। यो गुणहरु को एक संख्या हो कि कैफीन को लागी एक समान तरीका मा काम गर्न को लागी भनिएको छ, त्यो हो, उत्तेजना को माध्यम बाट। यो हामीलाई अधिक जागृत र उर्जाले भरिपूर्ण बनाउँछ। यो मात्रा मा खर्च गर्न को लागी आवश्यक छैन, तर एक उदारवादी तरीका मा हामी पहिले नै हाम्रो शरीर मा आवश्यक प्रभावहरु लाई प्राप्त गर्नेछौं।
पक्कै तपाइँ पनि सजग हुनुहुन्छ कि पागल को एक मुट्ठी एक दिन तपाइँको स्वास्थ्य र तपाइँको आहार को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प मध्ये एक हो। खैर, यो साँच्चै हो। किनकि जसरी हामी राम्ररी जान्दछौं उनीहरुसँग प्रोटीन छ तर ओमेगा ३ पनि छ र हामीलाई ऊर्जा दिन्छ। यो थकान संग लड्न को लागी खाना को एक अन्य बनाउँछ। निस्सन्देह, यदि तपाइँ एक स्वस्थ तौल कायम राख्न चाहानुहुन्छ, यो सबै भन्दा राम्रो छ अधिक प्राकृतिक र गैर तलाएको विकल्पहरु को लागी, सधैं मात्रा नियन्त्रण गर्न को लागी।
यो एक खाद्य पदार्थ हो कि हामी कुनै पनि आहार मा संयोजन गर्न सक्छौं, बिहानको खाजा बाट नाश्ता सम्म। किनकि उनीहरुसंग त्यो छ सन्तुष्ट शक्ति जो हामीलाई ऊर्जा संग भरिन्छ, एकै समयमा यो स्वस्थ छ र धेरै पोषक तत्वहरु संग हामीलाई भरिन्छ। तेसैले दलिया सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो कि हामी खाता मा लिनु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » पोषण » थकान संग लड्न को लागी मुख्य खानाहरु
4 भान्सा मा संगठनात्मक गल्ती